WPC ကုန်းပတ်-တရုတ် WPC ကုန်းပတ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း၊စက်ရုံ–HengSu Edging
Home » ထုတ်ကုန်များ » WPC ပစ္စည်း » သစ်သားပလတ်စတစ် Composite ကုန်းပတ်
သစ်သားပလတ်စတစ် Composite ကုန်းပတ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Wood ကပလတ်စတစ် Composite ကုန်းပတ်ဘုတ်အဖွဲ့သစ်သားအမျှင်များနှင့်အသစ်ပြန်လည် polyethylene, Bond အေးဂျင့်နောက်ထပ်နှင့်တင့ကနေဖန်ဆင်းတော်ကြပါတယ်။
အဲဒီမှာဆေးထိုးခြင်းမှမလိုအပ်, တံဆိပျ, အစွန်းအထင်းသို့မဟုတ်ရေစိုခံဖြစ်ပြီး, သူကဖော်ရွေ-Eco နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်မြဲသည်အတိုင်း, ကြာရှည်ခံမှုနှင့်ရာသီဥတုခုခံလိုအပ်သည်နေရာတိုင်းမှာသုံးစွဲဖို့စံပြဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါကုန်းပတ်အလွန်ခဲယဉ်း, ရေကိုစုပ်ယူအရောင်အတွက်မှိုသို့မဟုတ်မှိန်ဆွဲဆောင်နှင့်ကားပုပ်ပျက်တတ်မည်မဟုတ်ပါဘူး, ခွဲထွက်အဖွဲ့, အုပ်စုခွဲသို့မဟုတ်အတိုင်ဝတ်ထားသည်, အဲဒါကိုရှင်းလင်းထိန်းသိမ်းနည်းလွယ်ကူပါတယ်။
ဆွန်းသို့မဟုတ်အစိုင်အခဲအမာခံဆောက်လုပ်ရေး - ကျနော်တို့ဘုတ်အဖွဲ့နှစ်မျိုးကိုဆက်ကပ်။
1 ။ အဘယ်ကြောင့်ငါပေါင်းစပ်ကုန်းပတ်ကိုသုံးပါသင့်သလဲ
ကျွန်ုပ်တို့၏ wpc ကုန်းပတ်စိုးရိမ်ဖို့ဒါဟာပြန်လည်အသုံးပြုသစ်သားဖိုင်ဘာ, LDPE နှင့်စတင်ပလပ်စတစ်နှင့်ဆန်ခွံမုန့်ညက်တစ်ဦးပေါင်းစပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနိမ့်ဆုံးနဲ့တာရှည်တည်တံ့ဘဝရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမရှညျခံဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုအဘယ်သူမျှမခွဲထွက်အဖွဲ့ နာကျင်အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခု။
2 ။ ငါဘယ်လိုကြောင့်သန့်ရှင်းရေးသလဲ?
သင်တစ်ဦးဆပ်ပြာသို့မဟုတ်ကုန်းပတ်သန့်စင်တစ်ဖြီးနှင့်လတ်ဆတ်သောရှာဖွေနေစောင့်ရှောက်ရန်ရေပိုက်နှင့်အတူရံဖန်ရံခါသင့်ရဲ့ wpc ကုန်းပတ်ဆေးကြောသန့်စင်နိုင်ပါတယ်။ ပါဝါအဝတ်လျှော်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သာစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူအသုံးပြုသောနိုင်ပါတယ်။
3 ။ ငါဘယ်လိုဖြတ်ကသံနှင့်ရိုက်နိုင်သလဲ
WPC ကုန်းပတ်ရုံထိုကဲ့သို့သောကျွမ်းကျင်မှုလွှအဖြစ်ပုံမှန် tool ကိုနှင့်အတူသစ်သားနဲ့တူဖြတ်တောက်မှုနှင့်သစ်သားအားအလားတူလက်သည်းသို့မဟုတ် screw နှစ်ခုကိုလက်ခံပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလက်သည်းသို့မဟုတ် screw နှစ်ခုအပြည့်အဝအဆက်အသွယ်နဲ့ကိုင်ပြီးပါဝါကိုသေချာစေရန်ထူထပ်သောထောက်ခံမှုဒေသများမှာလျှောက်ထားရပါမည်။
4 ။ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါ၏အကုန်းပတ်ကြာရှည်လိမ့်မည်နည်း
သင့်ရဲ့ wpc ကုန်းပတ်သင်တန်း၏, သငျသညျကိုအသုံးပြုရန်ဘယ်လောက်ပေါ် မူတည်. နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ 15 နှစ်ပေါင်းန့်အသတ်အာမခံရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ဒီထုတ်ကုန်အပေါ်အခြေခံအဆောက်အသမာဓိမျှမယိုယွင်းသို့မဟုတ်အရှုံးလည်းမရှိကတည်းကကျနော်တို့ကကောင်းကောင်းအချိန်ကျော်လွန်သည်နောက်ဆုံးမှပါလိမ့်မယ်ယုံကြည် ။
ငါအရောင်ကိုပြောင်းလဲလိုလျှင်5။ ငါအနာဂတ်၌ငါ့ကုန်းပတ်ဆေးထိုးခြင်းနိုင်သလား?
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သငျသညျသဘာဝကသစ်သားကုန်းပတ်နှင့်အတူရှိသည်သောတူညီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ကသင်၏ wpc ကုန်းပတ်ပန်းချီအကြံပြုကြပါဘူး။ ပြီးတာနဲ့ခြယ်သ, သင်တက်-Keep ဆက်လက်ရန်လိုအပ်သည်။ Hengsu ပေါင်းစပ်ကုန်းပတ်ဘဝကြာရှည်ဦးမည်သည့်ဆိုးဆေးနှင့်အတူ impregnated ဖြစ်ပါတယ် ယင်းကုန်းပတ်၏။
ကို ABS Wood ကကောက်ပဲသီးနှံ Edge Band
Fireproof WPC မျက်နှာကျက်ကွက်များဆိုင်းငံ့ထား
WPC အမှတ်တရ Panel များ
WPC သစ် Tube